About Us - I-Wuxi Zhongshuo Machchan Co, Ltd.
Isazi Sokugaya Nge-Flat ka-Abrasives Belt Grinding for Metal: Lokhu okuhlosiwe kusisiza ukuba sigcine ucwaningo emkhakheni wokugaya insimbi nokuvumbulula owenziwe ngama-abrasives asuka ku-1990s. Ngo-2005 saqala ukuklama, ukukhiqiza nokuhlanganisa imishini ebanzi yokugaya amabhande ngensimbi. Ngokwanda okuqhubekayo kwebhizinisi nokuguqulwa kwesakhiwo samasheya, ngonyaka ka-Wuxi Zhongshuo Machchan Co, Ltd kwasungulwa.
Siyinkampani ephethwe ngosayizi ophakathi. Le nkampani itholakala eWuxi City, esifundazweni iJiangsu. Inhlokodolobha ebhalisiwe ingu-1 million Euro. Umshini wokuxubha. Indawo yokwakha idlula ama-7000 m2. Isibalo esiphelele sabasebenzi singaphezulu kwama-60, kufaka nonjiniyela ongu-1 wezocwaningo, onjiniyela abangu-2 abaphezulu kanye nonjiniyela aba-5. Sinegama lokuklama lobuciko, elekhishini, lokuhlanganisa, lokufaka, lokuhambisa kanye nethimba lenkonzo yokuthengisa. Sikhiqiza umshini wokugaya amabhande obanzi, wokuxubha umshini.umshini wokuqeda isibuko, umshini wokuqedela amandla, umshini wokuhlanganisa we-coil yensimbi nephepha, kufaka phakathi isigaba sokungena nokuphuma se-CGL (Coil to Coil Repairing Lineging grinding for rolling mill) kanye ne-CPL (Coil to Coil Polishing Line for Service Center), isb. Rewinder, Iyalayisha imoto, i-Pinch Roll, i-Flattener, i-Crop Shear, i-Coolant Filtration kanye ne-Recycling system, uhlelo lokuwasha nokomisa, i-Mist Collector, uhlelo lokulwa nomlilo. Siphinde sikhiqize idivaysi yokulayisha ngeVacuum Cups Group ye-Sheet to Sheet Grinding Line.
Uhlu lwethu lwezethenjwa kufaka phakathi iTisco Daming, uWuxi Puxin, uZhejiang Bohai, i-Western Titanium, iShinva Medical Instrument namanye amakhasimende aseChinese aziwa kahle. Sithumele imikhiqizo yethu ezweni lase-Europe njenge-Italy, Turkey ne-Certification ye-CE. Siphinde futhi sinikeze ngamabhande okulinganisa amakamelo kuMenzi waseChina onikeza lokhu ku-Aviation kanye Nemboni yeNyukliya.
Ukwakha inani lekhasimende kuyinto yethu ephishekelayo. Ukwaneliseka kwakho kungamandla emisebenzi yethu emisha eqhubekayo.